यौन कुण्ठाका कुरा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
यौन कुण्ठाका कुरा
जेष्ठ ४, २०७६ सम्झना वाग्ले भट्टराई
आन्टी, नरिसाउने भए एउटा प्रश्न सोध्छु है ?’ ऊ त्यस्तै १२/१३ वर्षकी थिई  । त्यतिखेर कक्षा ७ मा पढ्थी  । ‘प्रश्न सोध्दा पनि किन रिसाउथेँ त ?’ म मुस्कुराएँ ।
“हजुरहरूले परिवार नियोजनको कुन साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ ? मामुसँग सोधेको नचाहिँदो प्रश्न गर्छे भनेर रिसाउनुभयो । तर यो हाम्रो ‘हेल्थबुक’ को प्रश्न हो,” उसले थपी ।
मैले उत्तर दिएँ, केही भूमिका थपथाप गरेर । दुई दिनपछिको उसको प्रश्न झन् जटिल थियो मेरो लागि । ‘सेक्स के त्यस्तो नराम्रो हो र आन्टी ?’
यो सापेक्षतामा हुन्छ । समय, सन्दर्भ र सामाजिक मान्यताअनुसार राम्रो नराम्रो भन्ने गरिन्छ, भन्न चाहेको थिएँ । तर चुपचाप उसको अनुहार हेरिरहेँ ।
‘सेक्स नभएको भए संकल्प पनि त हुन्थेन नि है ?’ उसले मेरो छोरातर्फ देखाई र भनी, “यदि ‘त्यो’ नभएको भए हामी कोही पनि हुन्थेनौँ नि है ?”
हो नि । योभन्दा बढी म बोल्न सकिनँ । पछिल्ला दिनहरूमा उसले साथीहरूका कुरा गरी । उनीहरूबीच हुने छेडखानीका कुरा गरी । साथीहरूसँग भएका केही द्विअर्थी संवादहरू सुनाई । कसरी यौनाङ्गका चित्र बनाएर साथीहरूले किताबका पत्रहरूमा राखिदिन्छन् भन्ने कुरा गरी । अंग्रेजी उपन्यास, कथाहरूमा उल्लेख गरिएका यौनसम्बन्धी कुरा गरी । केही ‘ननभेज’ भनिने जोकहरू सुनाई । त्यसभन्दा अघि बढेर ‘एडल्ट फिल्म’ का पनि कुरा गरी ।
उसका अरू सबै कुराहरू सुनिरहेँ र ‘एडल्ट फिल्म’ हरू अवास्तविक हुन्छन् भनें । जसरी अरू कमर्सियल फिल्महरूमा ‘एक्जाजरेसन’ हुन्छ, जसरी प्रायशः बजारलक्षित फिल्महरू ‘लार्जर देन लाइफ’ बनाइने गरिन्छ, यी पोर्न फिल्महरू पनि त्यस्तै हुन्छन् । सकेसम्म यस्ता फिल्महरू नहेर्नू । यिनले यौन जिज्ञासाको उत्तर दिंदैनन् बरु गलत जानकारी दिन्छन् । यसले यौनबारे भ्रम सिर्जना हुन्छ भनेँ ।
ऊ ‘कन्भिन्स’ भएजस्तै गरी । मैले आफ्नो बालापन र किशोरावस्था सम्झिएँ । यसरी प्रश्न सोध्ने र उत्तर पाउने कुरा त हामी कल्पनासम्म गर्थेनौँ । मैले आमाको पेटबाट कसरी निस्किएँ भनेर सोध्दा गाली खाएको छु । महिनावारी हुँदा ‘रगत’ कहाँबाट आउँछ भनेर सोध्दा, पछि आफैँ थाहा पाउँछेस् भनेको देखि उत्ताउली र उम्रिँदैको तीनपात भन्नेजस्ता गाली खाएको सम्झन्छु । कौतूहलहरू त धेरै हुन्थे तर प्रश्नहरू घाँटीमा नै अड्किन थाले ।
किनकि त्यतिखेरका धेरैजसो मेरा जिज्ञासाका उत्तरहरू गाली मात्र हुन्थे । गालीले जिज्ञासा शान्त हुन्थेन । पेन्टी मात्र लगाएर सार्वजनिक धारामा नुहाइरहेका केटामान्छेको यौनांगको बारेमा चासो हुन्थ्यो । टेलिभिजनमा आउने अन्डरगार्मेन्ट, पर्फ्यम, कन्डमलगायतका विज्ञापन देख्दा कौतूहल बढ्थ्यो । बिस्तारै आफ्ना भनिएका ‘सिनियर’ हरूभन्दा उत्ताउला र छाडा भनिएकाहरूको कुराकानीमा चासो बढ्न थाल्यो । उनीहरूका छाडा कुराहरू रुचिकर लाग्न थाले ।
त्यसो त यौनसँग सम्बन्धित शब्दहरू मान्छेको हकमा वर्जितजस्तै भए पनि पशुपक्षीको हकमा भने यस्ता अभिप्रायका शब्दहरू सहजै उच्चारित हुन्थ्यो । जस्तै ः कुखुरालाई भाले लगाउन लगेको, बाख्राले बोका खोजेको छ, भैँसीलाई राँगो दिन लगेकोजस्ता कुरा जोकोही सहजै भन्थे । तर त्यस्ता ठाउँहरूमा छोरीहरूलाई लगिन्नथ्यो । दाइभाइहरू भने जान्थे । उनीहरूको अधिकार फराकिलो भएको र आफ्नो साँघुरो भएको महसुस हुन्थ्यो ।
विद्यालयमा प्रजनन् प्रणाली भन्ने पाठ शिक्षकहरू पढाउँथेनन् बरु आफैँ पढ भनेर छोडिदिन्थे । परीक्षामा महिला वा पुरुष जननेन्द्रियको चित्र बनाऊ भन्ने प्रश्न भने आउँथ्यो । यस्ता चित्रहरू बनाउन लुकेर अभ्यास गर्दै ती पेजहरू च्यातेर फ्याँक्ने गर्थें । रोमाञ्चक लाग्थ्यो । स्कुलका केही दिदीहरू, साथीहरू पाठ्यक्रमबाहिरका कुनै किताबहरू लुकीलुकी पढ्थे । किताबका नामहरू ‘जवानीको जोस’, ‘यौवनको प्यास’ टाइपका हुन्थे र बाहिरी गातामा झन्डै नांगैझैँ देखिने केटी मान्छेको तस्बिर हुन्थ्यो । मैले पढ्न माग्दा ‘तिमीजस्तो पढन्तेलाई यी किताब काम छैनन्’ भन्दै टार्थे ।
त्यसैताका एउटा त्यस्तै किताब हात लाग्यो, लुकेर पढेँ । पूराका पूरा यौनका कुरा थिए । त्यतिखेर त खासै बुझिनँ तर रमाइलो भने लागेको थियो । अहिले छ्यास्छ्यास्ती उपलब्ध हुने ‘पोर्न मुभी’ टाइपकै शब्द, वाक्य र भावहरू हुन्थे तिनमा । कक्षामा अलि राम्रो विद्यार्थी भनेर चिनिएकै कारण मैले अरू त्यस्ता किताबहरू पढ्न पाइनँ । पढाइ राम्रै भए पनि उमेरसँगै कौतूहलहरू झन् बढ्दै गए । तर उत्तर पाउने सम्भावित स्रोतहरू साँघुरिँदै गए र जिज्ञासाहरू त्यसै दबिन बाध्य भए ।
घरमा त्यतिखेर श्रीस्वस्थानी कथा, रामायण, महाभारत आदि पढ्ने गरिन्थ्यो । हामीले सती सावित्रीका कथा सुन्यौँ । उनले कसरी आफ्नो पतिव्रता धर्मको शक्तिको आडमा मृत श्रीमान्लाई यमराजबाट फर्काएर पुनर्जीवन दिन सकिन् भन्ने कथा थियो । श्रीस्वस्थानी कथामा वृन्दाको सतीत्वको आडमा उनका पति जालन्धर अजेय भएको र विष्णुले उनको सतीत्व डगाएपछि युद्धमा मारिएको कथा पढ्यौँ । रामायणमा अहिल्याको कथा छ । देवताका राजा इन्द्रले पति गौतमको रूप धारण गरी अहिल्यासँग सम्भोग गरे । गौतम ऋषिले थाहा पाई तिनै पीडित श्रीमतीलाई पत्थर भएर रहने श्राप दिए । पछि अहिल्यालाई भगवान् रामले उद्धार गरे ।
पुरुषले पुरुषका लागि लेखेका यस्ता कथा हाम्रा आदर्श जीवनका आधार बन्थे । आमाहरू पनि यस्ता कथाहरू दोहोर्‍याएर बुझाउनुहुन्थ्यो । यस्तै कथाका आधारमा वैवाहिक जीवन तथा यौन जीवनसम्बन्धी धारणाहरू बन्न थाले । नारीको जीवन बर्बाद पार्नेदेखि उद्धार गर्न सक्नेसम्मका हैसियत पुरुषमा हुने रहेछन् भन्ने छाप मनमा पर्न थाल्यो । यस्ता धेरै कथाहरू छन्, जुन मनमा अझै गढेर बसेका छन् ।
महाभारतको अनुशासन पर्वमा एउटा कथा छ । युधिष्ठिरले भीष्म पितामहसँग सम्भोगका समयमा नारी, पुरुष कसलाई बढी सुख आनन्द हुन्छ भनी सोध्छन् । प्रत्युत्तरमा आजीवन ब्रह्मचर्यमा रहेका भीष्मले आफूले बृहस्पतिबाट सुनेको एक कथा सुनाउँछन् ।
भगास्व नाम गरेका एक राजा थिए । एक दिन सिकार खेल्न जंगलमा जाँदा सैन्यहरूसँग छुटेछन् । राजाले एकान्तमा एउटा तलाउ देखेर त्यहाँ नुहाउँछन् । आश्चर्य हुन्छ, उनको शरीरबाट पुरुष अंगहरू गायब हुन्छन् र नारीको शरीरमा रूपान्तरण हुन्छन् । यसबाट चिन्तित उनी हतारहतार दरबार फर्कन्छन् र जेठा छोरालाई राजकाजको जिम्मा दिएर तपस्या गर्न भनी घोर जंगलमा पुग्छन् । महिलारूपी भगास्वको जंगलमा एक ब्राह्मणसँग भेट हुन्छ र तिनै ब्राह्मणसँगको यौन सम्बन्धबाट उनले सय जना छोराहरू जन्माउँछिन् ।
कथाअनुसार उनले ती सय जना छोराहरूलाई आफ्नो पहिलेको राज्यमा पठाउँछिन् । उनीहरूको भगास्व (पुरुष) राजा हुँदाका छोराहरूसँग लडाइँ हुन्छ र दुवैतर्फका सबै छोराहरू मारिन्छन् । यसबाट व्याकुल उनी खुब विलाप गर्छिन् । पीडाले व्याकुल उनलाई देवताका राजा इन्द्र आएर सम्झाउँछन् र सबै छोराहरू जीवित बनाइदिन्छन् । ती स्त्री भगास्वलाई पनि फेरि पुरुष बन्न चाहेमा बनाइदिने इन्द्रले बताउँछन् । तर उनले महिलाको रूपमा नै रहने इच्छा जाहेर गरेपछि इन्द्रले कारण सोध्छन् । पुरुष र स्त्री दुवै जीवनको अनुभव भएकी उनी भन्छिन्, ‘सम्भोगको समयमा नारीहरूले जुन आनन्द प्राप्त गर्छन्, त्यो पुरुषलाई प्राप्त हुँदैन ।’ त्यसैले राजसुख छोडेर ब्राह्मणपत्नी नै भएर जंगलमा नै बस्न चाहन्छु भन्ने उनको उत्तर हुन्छ ।’
यस कथामा नारीलाई सम्भोगजस्तो आनन्ददायक अरू केही सुख हुँदैन भनिएको छ । यो कथा पढ्दै गर्दा म खुब यौनसम्बन्ध सम्झन्थेँ । कक्षामा केटामा भन्दा केटीहरूमा आठ गुणा बढी यौन चाहना हुन्छ भन्थे केही केटाहरू । हामीले नसुनेझैँ गरे पनि स्पष्ट सुनेका हुन्थ्यौँ । यो कुरा कथासँग मिलेजस्तो लाग्थ्यो । यसले अनौठो भावनाको सञ्चार गर्थ्यो । निरञ्जन निराकारजस्तो यौनसम्बन्धबारे अनौठो चित्र मनमा आउँथ्यो । त्यसै ताकाको कुरा हो, कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी हाम्रै कक्षाकी एक साथीले भागेर बिहे गरी ।
उत्ताउली, बिग्रिएकी भनेर धेरैले कुरा काटे । केही साथीहरूले उसको यौनजीवनको बनावटी कथा भन्दै रमाउँथे । नढाँटी भन्दा उसको यौनजीवनको कल्पना गरेर म पनि रोमाञ्चित बनेकी थिएँ त्यतिखेर । पछि दस कक्षामा पढ्दा हाम्रै कक्षाका ट्युसन पढ्न गएका एक केटा र केटीको यौनसम्बन्ध भयो रे भन्ने हल्ला भुसको आगोजस्तै फैलियो । हल्ला फैलिएसँगै केटी पढाइ छोडेर मामाघर गई । उतैबाट उसको बिहे भयो । यस घटनाले केटालाई भने कुनै असर पारेको देखिएन, सुनिएन । बरु केटी हाम्रै कक्षाकी भएकीले हामीले पनि धेरै लाञ्छना सहनुपर्‍यो । यौनप्रतिको चासो बढ्दै गए पनि यसको सामाजिक मूल्यले हाम्रा लागि यौन थप त्रासको विषय बन्न थाल्यो ।
यौनसम्बन्धको बारे कुरा भए पनि विवाहपूर्वको यौनसम्बन्धबारे कसैले उच्चारण गर्दैनथे । यौनसम्बन्ध र विवाहलाई पर्यायवाचीको रूपमा बुझ्थ्यौँ । सिकाइ त्यही थियो, बुझाइ त्यही थियो । त्यतिखेर आफ्नो विवाहको कुनै गुञ्जायस थिएन । दिदीहरूको विवाह पनि बाह्र कक्षा पास भएपछि मात्र भएकाले म कहिले बाह्र पास हुन्छुजस्तो लाग्थ्यो ।
एसएलसीपछि क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ आइयो । कक्षाकै कतिपय सहपाठीसँग आकर्षण हुन्थ्यो । आकर्षण प्रेममा बदलिन्छ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो । तर त्यो आकर्षण प्रेम हुँदै बिहेमा पुग्न सक्ने सम्भावना त्यतिखेर शून्यजस्तै लाग्थ्यो मेरो हकमा । यसका पछाडि मेरा आफ्नै तर्क थिए, बुझाइ थिए । मेरा दिदीहरूको उहाँहरूभन्दा झन्डै आठ/दस वर्ष उमेर बढी भएको जागिरेसँग बिहे भएको थियो । भाउजूहरू पनि दाइहरूभन्दा आठ/दस वर्ष नै कम उमेरका थिए । त्यतिखेर मैले त्योभन्दा फरक सोच्नै सकिनँ । सायद त्यही देखेँ, त्यही बुझेँ । यही बुझाइले आफ्नै कक्षाको समवयी केटाको प्रेम प्रस्ताव स्विकार्ने मानसिकतामा म थिइनँ । सुन्दा अनौठो लागे पनि मेरो हकमा त्यही भएको थियो । आजभोलि कलेजका ती प्रेम प्रस्ताव राख्ने सहपाठी बेलामौकामा भेट हुन्छन् । अहिले त्यतिखेरको आफ्नो मानसिकता सम्झेर आफैँलाई अनौठो लाग्छ ।
स्नातक तहको पढाइ सुरु भएपछिका प्रेमसम्बन्धका कुराहरू पहिले नै लेखिसकेकी छु । उमेरमा परिपक्वतासँगै यौनसम्बन्धी कुराहरू प्राकृतिक लाग्न थाले । उखरमाउलो कौतूहल बाँकी रहेन । बिस्तारै पुस्तकहरू पढ्ने बानी लाग्यो । आख्यानमा पारिजात, बीपी, गोठाले, संग्रौला, आहुति, नयनराज पाण्डे, नारायण वाग्ले, बुद्धिसागर, नगरकोटी, उमा सुवेदी, अर्चना थापा र पाएसम्म अरू पनि पढेँ । कोनन डोयल, अगाथा कृष्टि, सिड्नी सेल्डनदेखि सीता पाण्डे पनि पढ्न छुटाइनँ । यी पुस्तकहरूले यौनलगायतका अन्य धेरै विषयबारे बुझ्न सहज बनाए । समाजशास्त्रमा उच्चशिक्षाको अध्ययनसँगै गैरआख्यानतर्फ पनि रुचि बढ्यो ।
सिमोन द वाउवा, मिसेल फुको, चैतन्य मिश्र, शारदा शर्मा, हरिबहादुर थापा, सुलामिथ फायरस्टोनलगायतका उपलब्ध भएसम्मका अरू पुस्तकहरू पढियो । त्योभन्दा बढी समाजशास्त्रका प्राध्यापकहरूले पुस्तकसँगै समाज कसरी पढ्ने र बुझ्ने भन्ने सिकाउनुभयो । पितृसत्ताले बनाएका सामाजिक संरचनाहरू, सामाजिक मनोविज्ञानहरू, नेपाली समाजमा विद्यमान यौनप्रतिको बुझाइ आदि बुझ्न सहज भयो । पुरुष लेखकले गोमा ब्राह्मणी, सती सावित्री आदिको कथा किन रचे ? द्रौपदी कसरी महाभारतको कथाकी केन्द्रीय पात्र बनिन् ? वधूशिक्षा किन लेखियो ? जस्ता कुरामा तर्क गर्न सक्ने भएकी छु । पुरुष मनोविज्ञानले लेखिएका यस्ता कथाले महिला मनोविज्ञान निर्माणमा कसरी भूमिका खेले केही बुझेको जस्तो लाग्न थालेको छ । म आफूमा रहेको यौनलगायत अन्य कुण्ठा पनि तिनै कथाहरूका उत्पादन त हुन् ।
अहिले लाग्छ सायद अन्य जनावरहरूको जस्तै मान्छेको हकमा पनि यौन प्राकृतिक विषय मात्र भएको भए यौनका सन्दर्भमा यति धेरै कुण्ठा हुने थिएन कि । मानिस विवेकशील प्राणी भन्ने नाममा, सभ्यता, अनुशासन आदिका नाममा हामी जीवनमा धेरै नाटक गर्न अभिशप्त रह्यौँ, छौँ । हाम्रा कतिपय परम्पराहरू, यौनव्यवहार र बुझाइ पनि लैंगिक आधारमा विभेदकारी थिए, छन् । संस्कार र मान्यताका नाममा समाजले अभ्यास गर्दै आएका कुरा महिला, पुरुष दुवैमा समान रूपले लागू नभएकाले नै हामी कुण्ठाग्रस्त कृत्रिम जीवन बाँच्न अभिशप्त छौँ । यदि मानव सभ्यतको क्रममा अभ्यास गरिएका विषयहरू र बुझाइहरू लैंगिक विभेदकारी नभएको भए समाज र सभ्यता अझै उन्नत हुन्थ्यो होला ।
यस्ता कुरा अझै धेरैलाई बेकारको गन्थन लाग्ने गर्छ । तर यो लेख लेख्दै गर्दा साथीले एउटा तीतो अनुभव सुनाई । एक वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा घरमा नै छोडर अफिस आउने ऊ ‘टुटल सर्भिस’ को प्रयोगकर्ता हो । यसैलाई विवादको विषय बनाउँदै उसको लोग्ने भन्ने गर्छ रे, ‘टुटल, पठाओ आदिले त तिमीहरूलाई पो मोज छ, दिनदिनै फेरी फेरी... ।’
कि कुण्ठा पुरुषमा नै बढी छ ?
वैशाख ३०, २०७६ सम्झना वाग्ले भट्टराई
एकजना रक्स्याहा व्यक्तिको परिवारमा श्रीमती र दुई छोरा थिए । त्यो व्यक्ति सधैँ मात्थ्यो र घर पुगेपछि श्रीमतीलाई पिट्ने गथ्र्यो । घरमा सधैँको रुवाबासी ! छिमेकीहरूसमेत आजित थिए । समय बितेसँगै दुवै छोराको बिहे पनि भयो । दुईमध्ये एउटा छोरा ठ्याक्कै बाबुजस्तै निस्कियो ।
जाँडरक्सी खाने, घरमा झैझगडागर्ने । अर्को छोरो भने अत्यन्तशिष्ट र मिलनसार थियो ।
ती दुवै छोरासँग गाउँका एक भलादमीले बानी-बेहोराबारे कुराकानी गरे । बाबुको जस्तै व्यवहार भएको छोराले भन्यो, 'के गर्ने काका ! जस्तो वातावरणमा हुर्कें, त्यस्तै भएँ । यो सब बुबाकै कारणले भएको हो ।' शिष्ट छोराले त्यही प्रश्नको जवाफमा भन्यो, 'बुबाकै कारण म यस्तो भएको हुँ । बुबा सधैँ जाँडरक्सी खाएर झैझगडा नगर्नुभएको भए म त्यस्तो व्यवहारले घर नर्क हुने रहेछ भन्ने थाहा पाउन्नथेँ । मलाई बुबाको गल्ती दोहोर्‍याउनु थिएन ।'
पहिले देश राजाको मानिन्थ्यो । राजाले कर्मचारी, सैनिकहरू तथा इच्छाएका व्यक्तिहरूलाई चाहेको सम्पत्ति दिन्थे । राणाशासनको उदयसँगै राज्यका स्रोतसाधनको उपयोग/दुरुपयोगको अधिकार राणाहरूमै सर्‍यो । उनीहरूलेव्यक्तिगत सुखसुविधाका लागि
राज्यको स्रोत र सम्पत्तिमाथि सक्दोदोहन गरे । पुस्तौँसम्मका लागि सञ्चय गरे । पञ्चायत व्यवस्था आएपछि पञ्चहरू शोषकका रूपमा स्थापित हुँदै गए । अञ्चल, जिल्ला र गाउँ पञ्चायतसम्म राजाको अनुहार बोकेका पञ्चहरूले राज्यका स्रोतसाधनमाकब्जा जमाइरहे ।
२०४६ पछि पञ्चहरूको स्थान कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले लिए । २०६२-६३ को आन्दोलनपछि माओवादीहरू थपिए । राज्यको स्रोतसाधन र लाभका पदहरूमा उनीहरूकै एकछत्र चल्न थाल्यो । अहिले चर्चामा रहेको बालुवाटारको जग्गा प्रकरण त्यसैको एउटा हिस्सामात्र हो । व्यवस्था फेरियो, पात्रहरू फेरिए, तर हातमा डाडु-पन्यु हुनेहरूको चरित्र फेरिएन ।
माथिको कथाको शिष्टचाहिँ छोरोजस्तो हुन कसैले चाहेनन् । मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचारको कारण यही हो । जसरी भए पनि सम्पत्ति जोडेको मानिस आम नेपालीका आँखामा सम्माननीय ठानिँदै जानुको कारण पनि यही हो ।
यो प्रवृत्ति राजनीतिक दल र तिनका नेता-कार्यकर्ताहरूमा मात्र सीमित छैन । जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पैतृक जग्गा अंशबन्डाको काम थियो । श्रीमान्साथ म पनि त्यतै गएकी थिएँ । मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड, अस्तव्यस्तता ।
झन्झटिलो प्रक्रियादेखि आफैँ फाइल बोकेर पार लगाउने हिम्मतै आएन । लेखनदासको सहयोग अपरिहार्य भयो । सम्पर्क गर्दा लेखनदासले स्पष्ट शब्दमा आफ्नो सेवा शुल्क, कर्मचारीको भाग र राजस्व गरी लाग्ने रकम खुलाइदिए । उनले हाम्रालागि सहजकर्ता महिला खटाइदिए । ती महिलाले हाम्रो फाइल बोकेर यो झ्याल र त्यो झ्याल चहारिरहिन् । हामी पछिपछि कुदिरह्यौं । त्यस क्रममा उनले 'यहाँको चलन यस्तै हो, नत्र दुई-चार दिन यसै झुलाइदिन्छन्' भन्दै चार-पाँच सय रुपैयाँ पाँच पटकजति मागिन् । काम सकिएपछि साउतीगरिन्, 'यो कुरा दाइ (लेखनदास)लाई नभन्नू है !'
उक्त उदाहरणले देखाउँछ, नेता र सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि यसबाट अछूतो छैन । वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा वा त्यसको प्रक्रियामा धितो मूल्यांकन गर्दा अतिरिक्त पैसा नदिई काम हुँदैन । एनसेल प्रकरण सल्टिएको छैन । मेडिकल क्षेत्र विकृत छ । खुला मञ्चको दर्दनाक कथा हामी पढिरहेछौँ । अख्तियारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले अनाचारमा सामेल हुन हिचकिचाउन छाडेका छन् । न्यायालय आफै पनि सुकिलो रहन सकेको छैन ।
विकृत समयमा बाँच्न हामी वर्षौंदेखि अभिशप्त छौँ । पचास वर्षअघि भैरव अर्यालले लेखेका थिए :
चोरी-चकारी नगरी चतुर्‍याइँ हुन्न
दंगाफसाद नगरे इज्जतै रहन्न ।
सोझा र सज्जन कबै नलिनु दलैमा
पार्टी चलाउनु सधैँ छल औ बलैमा ।।
सबै क्षेत्रमा छल र बलको दबदबा छ । राजनीतिक दलहरूमा मात्र होइन, सरकारी, निजी, गैरसरकारी हरेक क्षेत्रमा यो विकृति विद्यमान छ । सतहमा देखिएका विविध राजनीतिक परिवर्तनका बावजुद परिस्थितिमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन ।
शासकहरूमा राज्यको स्रोतसाधन मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र त्यसको उपयोग वा बाँडफाँडमा मेरै तजबिजी हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । अनाचार शासकहरूमा वंशानुगत बनेको छ । उपचार खर्च, बजेट तथा योजनामा दबाब, लाभका पदहरूमा नियुक्ति र जग्गाजमिनको भागबन्डा त्यसै मानसिकताको उपज हो ।
सुकिलो विगत, आशंकारहित वर्तमान र भरोसायोग्य भविष्य भएका हाम्रा राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा को छन् ? वास्तवमा हामीले गर्व गर्नसक्ने, हाम्रा आदर्श व्यक्तिको अहिले खडेरी छ । माथिको कथामा झैं बाबुको सिको गर्ने शासकहरू मात्र भए, बाबुको गल्तीबाट सिक्ने र गल्ती नदोहोर्‍याउने शासकहरूको अभाव सधैँ रह्यो ।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:०८